Izilawuli ezihamba phambili ze-COD (Novemba. 2020) - Kumele Ufunde - Izesekeli
ICall of duty ingenye yemidlalo ethandwa kakhulu emhlabeni wonke, futhi ibilokhu ihamba phambili maqondana nenani labantu abadlalayo. Yaqalwa ngonyaka we-2003. Ekuqaleni, yayidlalwa kuma-PC nakuma-laptops kuphela, kepha ngemuva kokuvela kwama-smartphones, kwabonakala isidingo esikhulu senguqulo yayo ephathekayo. Njengoba i-smartphone ayinayo ikhibhodi ephelele futhi akulula ukusebenzisa izikrini ezincane zokuthinta ukuhamba okusheshayo ngenkathi udlala umdlalo ofana nokubizelwa umsebenzi.
Ngakho-ke, abalawuli beselula basungulelwa ukwenza isipiliyoni sakho sokudlala kuma-smartphones akho sijabulise, sijabulise futhi siphelele. Isilawuli esiphathekayo sokudlala imidlalo sikuvumela ukuthi ulawule igeyimu ngezinkinobho zayo eziguqukayo futhi ezilula zokugcina. Benza igeyimu ibe lula futhi isebenze kahle.
The Best COD Hambayo Izilawuli-Top 5 Uhlu
Mhlawumbe ufuna isilawuli segeyimu esizodlala i-Call of Duty. Ngakho-ke, sicabange ukukunikeza isheke esisheshayo kwesinye sezilawuli ezingcono kakhulu zeselula ezitholakala emakethe ngokudlala i-COD kuma-Smartphones.
1. Umlawuli we-BEBONCOOL Mobile
Ingenye yezilawuli ezihamba phambili zeselula ezitholakalayo zokudlala ikholi yomsebenzi kuma-Smartphones akho. Iyahambisana ne-Android ne-IOS futhi iza nezinkinobho eziyi-12 zokulawula imephu ezinyakazayo. Ungaba nesipiliyoni esikhulu futhi esihlekisayo sokudlala ngenkathi usebenzisa leli thuluzi nge-smartphone yakho ngokudlala i-CoD.
Ukwakhiwa kwekhwalithi enhle
Isipiliyoni semidlalo ye-Premium
Induku enkulu ye-analog
Ayikho inkomba yebhethri
2.I-GameSir G6 Isilawuli Seselula
I-GameSir G6 iyisilawuli esisodwa esingenantambo sokudlala imidlalo kuma-Smartphones akho. Yintsha emakethe futhi inezincazelo ezintsha. Kukusiza ukuthi udlale ngenkathi ugcina zombili izilawuli nezikrini zokuthinta isikrini.
Izinkinobho zokulawula eziyishumi
Induku yokudlala ye-3D
Umdlalo omuhle kakhulu
3. 5 Ku-1 Isilawuli Seselula
Lesi silawuli segeyimu yeselula sikunikeza ngenzuzo yokunquma ngasikhathi sinye, ukukhomba, ukuhambisa, nokudubula ngokusebenzisa iminwe yenkomba ukulawula izinkinobho. Lesi silawuli seselula sikhulula isithupha sakho enkingeni yokwenza noma yikuphi ukulawula okwengeziwe.
Ngaphezu kwalokhu, iza nefeni yokuphola esezingeni eliphezulu futhi ehlakaniphile nebhethri elakhelwe ngaphakathi le-400mAh eliwusizo ekwehliseni izinga lokushisa kwama-Smartphones futhi ngasikhathi sinye likhokhisa i-smartphone.
Ikhokhisa i-smartphone futhi yehlise izinga lokushisa kwayo
5 1 uhlelo lokulawula
Amaphedi wokuthinta amancane amancane
4.I-SteelSeries Stratus Duo
Isilawuli sokudlala esingenantambo futhi sihambisana nehedisethi ye-Android, Windows, neVR. Ikunikeza ngomuzwa omuhle kakhulu wokudlala. Iza nebhethri efinyelela emahoreni angama-20, okuyenza ilungele izikhathi zokudlala zebanga elide.
Ukuxhumeka kwayo kwe-2.4Ghz kukuqinisekisa ukuthi awusasebenzi, okungakuvumeli ukuthi ulahlekelwe yizibhamu zakho emdlalweni.
5. I-EasySMX Grip
Isilawuli seselula se-EasySMX sikunikeza kalula lapho usiphatha futhi sithatha indawo yezilawuli zeselula ezinentambo nezinamandla okungelula ukusingatha. Lesi silawuli esingumakhalekhukhwini sikunikeza isibambiso esingeziwe futhi sengeza okudala ku-smartphone yakho.
Kubandakanya nefeni lokupholisa ukuvikela ifoni yakho ekushiseni ngokweqile.
Isipiliyoni sokudlala sokugcina
Ilusizo Kangakanani Abalawuli Bamaselula E-COD?
Yize ukudlala imidlalo ku-smartphone nakho kujabulisa futhi ungadlala imidlalo yakho oyithandayo noma yikuphi. Ama-Smartphones ashintshe kakhulu ezweni lokudlala. Ukudlala ukudubula neminye imidlalo enjalo esezingeni eliphakeme ayisadingi i-PC noma ilaptop. Ungazilanda futhi udlale ngokungapheli.
Ngokuphambene nalokho, ukubeka imidlalo kumaselula kungahle kukhungathekise ngezizathu ezimbili. Okokuqala ukuthi izikrini ezikuma-Smartphones akho zinendawo elinganiselwe, futhi okwesibili, awukwazi ukusebenzisa izilawuli kusikrini sokuthinta ngempumelelo.
Ukumelana nezinkinga ezinjalo, abalawuli beselula bangaba yisinqumo esingcono kakhulu kuwe njengomthandi womdlalo. Uma ungumlandeli we-CoD, ukuyidlala kuselula yakho ngesilawuli seselula kuzokusiza ukuthi uyizwe ngokushelela nangokwesasa okukhulu. Ngokwengeziwe, isilawuli seselula sandisa amathuba wokuwina njengoba senza kube lula kakhulu ukugxuma, ukuvika, ukuhambisa, nokudubula.
Abalawuli beselula bashintshe i-gameplay kuma-mobiles. Amageyimu njengeCall of Duty maningi kakhulu ukuba angadlalwa kuma-Smartphones ngokusebenzisa isilawuli seselula. Isikrini esincane nokulawulwa okulinganiselwe kwesikrini sokuthinta ngeke kusakucasula ngenkathi udlala.
Ukusebenzisa isilawuli seselula akusizi nje kuphela ukuthuthukisa isipiliyoni sakho sokudlala esijabulisayo nesijabulisayo, kepha futhi kwandisa amathuba wokuwina ngokwandisa ijubane lakho ngezinkinobho zokulawula ezibushelelezi.
Siyethemba ukuthi sikusize ngokwanele ukuthi uthole ukulawula okungcono kakhulu kwe-COD ngokunikeza ukuhlaziywa okuningiliziwe kwabalawuli beselula nokungeza imikhiqizo emibili emihle kulesi sihloko esingenhla.
Tencent Gaming Buddy Thwebula
ungayisebenzisa kanjani i-hulu kusuka ku-spotify
i-beat maker yokulanda i-pc
lapho ongabuka khona i-anime yamahhala
ukusakazwa kwezemidlalo bukhoma mahhala ku-inthanethi
i-emulator ye-pc yokulanda mahhala